Funda indlela yokuvakalisa amagama aseJamani ngesiNgesi
Kukho indlela efanelekileyo kunye nendlela engafanelekanga yokubiza ngokuthi "Porsche," umzekelo
Nangona indlela efanelekileyo yokubiza amagama aseJalimane ngesiNgesi ingaba yinto engabonakaliyo, oku akuyona enye yazo: I-Porsche igama lentsapho, kwaye amalungu omndeni ayichaza igama lakhe ngePORSH .
Uyakhumbula xa i-automaker yaseFrance i-Renault isathengisa imoto eMntla Melika? (Ukuba udala ngokwaneleyo, unokukhumbula i-Renault yeLe Car.) Kwiintsuku zokuqala, amaMerika athi igama lesiFrentshi i-ray-NALT. Kanye malunga nexesha apho ininzi lethu lisifunde ukusho i-ray-NOH ngokuchanekileyo, i-Renault yakhupha ngaphandle kwemakethi yase-US.
Unikwe ixesha elaneleyo, amaMerika ngokuqhelekileyo angafunda ukubiza amagama amaninzi angaphandle-ukuba awubandakanyi i-ditre d okanye i-hors-d'oeuvres.
Umzekelo Wenye E-Silent-E
Omnye umzekelo "u-silence-e" ungumgama wegama: Deutsche Bank. Ingaba ngumthengisi ovela kwixesha eliqhelekileyo elingumgaqo-mali waseYamani, iDeutsche Mark (DM). Kwabafundi abakhululwe ngesiNgesi bangathi "DOYTSH uphawu," ukuyeka i-e. Xa kufika i-euro kunye nokudlulela kwe-DM, inkampani yaseJamani okanye amagama eendaba kunye ne "Deutsche" kubo sele ibe yinto ekujoliswe kuyo ngokutsha: uDeutsche Telekom, iDeutsche Bank, Deutsche Bahn, okanye uDeutsche Welle. Ubuncinane abantu abaninzi bafumana isiJalimane esithi "eu" (OY) esilungileyo ngokufanelekileyo, kodwa ngamanye amaxesha ufumana ukutya.
Neanderthal okanye Neandertal
Abantu abaninzi abanolwazi banqwenela ukuba amagama aseJamani anjenge-no-ander-TALL. Kungenxa yokuba i-Neanderthal iyigama lesiJalimane kwaye isiJamani asinaso isandi seNgesi "i." I-Neandertal (enye iNgesi okanye isiNgesi) iyintlambo (iTal) ebizwa ngokuba nguJamani ngegama likaNeumann (indoda entsha) .
Ifomu leGrike igama lakhe nguNeander. Amathambo angamafutha e-Neandertal man (homo neanderthalensis ligama lesiLatini elisemthethweni) afunyenwe kwiNtaba yaseNeander. Enoba uyipela nge-or th, ukubiza okungcono kunesine-ander-TALL ngaphandle kwesandi.
Amagama Egama lesiJamani
Ngakolunye uhlangothi, ngamagama amaninzi aseGermany (Adidas, Braun, Bayer, njl.), IsiNgesi okanye isiNgisi sichaza indlela eyamkelekileyo yokubhekisela kwinkampani okanye kwimveliso yayo.
NgesiJamani, iBraun ichazwa njengegama lesiNgesi elibomvu (elifanayo ku-Eva Braun, ngendlela), kungekhona i-BRAWN.
Kodwa mhlawumbi uya kubangela ukudideka xa ugxininisa indlela yaseJamani yokuthi uBraun, i-Adidas (AH-dee-dass, ugxininise kwisixhobo sokuqala) okanye iBayer (BYE-er). Kuyafana noDkt. Seuss, ogama lakhe lingu-Theodor Seuss Geisel (1904-1991). UGeelel wazalelwa eMassachusetts waya kubafuduki baseJamani, waza wabiza igama lakhe lesiJalimane elithi SOYCE. Kodwa ngoku wonke umntu kwihlabathi elithetha isiNgesi uvakalisa igama lomlobi ukuba enze isigqi nge-goose.
Imigaqo engavumelekanga rhoqo
Igama / igama Ukubizwa
Eva Braun ntsundu
(UTheodor Seuss Geisel) soyce
Umbhali waseJamani, umbongi GER-ta ('er' njengefern)
kunye nawo onke ama-oe-magama
Loess / Löss (geology)
umhlaba omhle lers ('er' njengefern)
Izikhokelo zeFonetic ziboniswe ziphantse.
ngolwimi oluqhelekileyo lwaseJamani
Wort / Igama Aussprache
airbag ( Luftkissen ) beck-air
uxoxe (ukuxoxa) ngumbethe
yenkomo yenkomo kornett beff
phila (sichaza.) lyfe (live = ubomi)
Nike nyke (u-silence e) okanye
nee-ka (iilwimi zaseJamani)
Xa Utshintsha 'Y' ku 'E' kwaye 'O' ku 'U' ngesiSpanish
Idioms nge Draw
Iinzuzo zokuhamba isiGrike kwiKholeji
I-Novena yokuthembela kwiNtsliziyo engcwele kaYesu
IGerimoimo kunye neFort Pickens
Ubusuku bukaMusorgsky kwiNtaba yaseBald
Iimpawu zeeNkcukacha zikaRhulumente ezi-Absolute Lies